Baiboly Roa Metatra ho An’ireo Tsy Mahita Tsara
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Anglisy Arabo Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Chichewa Chol Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Fante Frantsay Grika Géorgien Haoussa Hindi Holandey Hongroà Ibo Indonezianina Iokrenianina Isoko Italianina Japoney Kannada Kinyarwanda Konkani (Romanina) Koreanina Kreôla any Haïti Kroaty Lingala Litoanianina Malagasy Malezianina Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Nahuatl (Afovoany) Norvezianina Nzema Persianina Poloney Portogey Rarotonga Romanianina Rosianina Serba Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tahisianina Tajiki Tamoul Tarasque Tiorka Totonac Tseky Tsonga Tzotzil Valencienne Xhosa Zapoteky (Lachiguiri) Zoloa tzeltal
Rehefa hanafatra Baiboly soratra Braille amin’ny Vavolombelon’i Jehovah ianao, dia jereo tsara aloha sao tsy misy toerana hametrahana azy. Boky 18 ka hatramin’ny 28 ny Baiboly Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao manontolo amin’ny soratra Braille, ary efa misy amin’ny teny anglisy, espaniola, ary italianina. Mila roa metatra eo amin’ny talantalanao ianao, fara fahakeliny, mba hametrahana azy ireo.
Tsy mibahana be toy ny Baiboly amin’ny taratasy mivohitra daholo akory ny fitaovana ampiasain’ny jamba. Afaka manoratra sy mamaky rakitra elektronika amin’ny alalan’ny notetaker koa ny jamba. Fitaovana entin-tanana mampivohitra sy mampiletsy teboka izy io, ary mamoaka soratra Braille. Mamadika ny soratra ho feo koa ny programa mpamaky efijery ka azon’ny jamba ampiasaina hitadiavana boky sy hihainoana an’izay voasoratra ao anatiny.
Namorona programan’ordinatera koa ny Vavolombelon’i Jehovah mba hahafahana mamadika soratra amin’ny fiteny samihafa ho Braille. Raha vao tafapetraka ao amin’ilay programa ireo soratra pirinty sy ireo soratra Braille mifanitsy aminy, dia afaka mamadika lahatsoratra ho amin’ny soratra Braille ilay programa. Amboariny koa ilay boky mba ho mora amin’ny jamba ny mamaky azy. Noho ilay programa dia azo atao ny mamoaka boky sy gazety amin’ny soratra Braille, anisan’izany ny Baiboly. Azo atao amin’ny fiteny isan-karazany izany raha misy amin’ny soratra Braille ilay fiteny, na dia tsy mampiasa soratra romanina aza.
Efa 100 taona mahery izay ny Vavolombelon’i Jehovah no namoaka boky ara-baiboly ho an’ny jamba, ary misy amin’ny fiteny 19 izany izao. Na dia afaka mahazo an’ireny boky ireny maimaim-poana aza ny jamba, dia manao fanomezana an-tsitrapo ny ankamaroany.
Hatramin’izay rehefa misy boky vaovao avoaka any amin’ny fivoriamben’ny Vavolombelon’i Jehovah, dia ilazana ny mpanatrika hoe azo hafarana any aoriana kely ny amin’ny soratra Braille. Nanao fanadihadiana anefa ny biraon’ny sampan’i Etazonia, tamin’ny herintaona. Tiany ho fantatra hoe aiza avy ireo jamba no hanatrika fivoriambe ary amin’ny endrika inona no tiany hamakiana teny: Amin’ny taratasy misy teboka mivohitra, sa amin’ny notetaker, sa amin’ny programa mpamaky efijery.
Nalefa tany amin’izay fivoriambe natrehiny ny an’ireo te hamaky amin’ny taratasy misy teboka mivohitra, ka afaka niara-nahazo boky vaovao tamin’ny besinimaro izy ireo. Nalefa e-mail herinandro taorian’ny fivoriambeny kosa ny an’ireo nifidy ny rakitra elektronika.
Hoy ny Vavolombelona jamba iray: “ Tombontsoa be ny hoe mahazo boky miaraka amin’ny olon-drehetra. Milaza ny Salamo 37:4 fa homen’i Jehovah antsika izay irin’ny fontsika. Izany mihitsy no nataony tamin’ity faran’ny herinandro ity! ” Nisy iray hafa nitomany sady niteny hoe: “ Tsy hadinon-dry zareo aho. Misaotra an’i Jehovah aho fa mikarakara tsara anay izy. ”